Lan Thit - Myanmar Job Finder - Android app on AppBrain
Android Apps > Business > Lan Thit - Myanmar Job Finder
လူငယ် အလုပ်အကိုင် အိပ်မက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ "လမ်းသစ်" ကို သုံးကြစို့!
Feb 14, 2019 Update Version 2.2
Nov 14, 2018 Update Version 2.0
Apr 27, 2018 Update Version 1.7
Feb 2, 2018 Update Version 1.5
Nov 25, 2016 Update Version 1.0
Aug 18, 2016 New App Version 1.0 in BUSINESS for Free
လွယ်ကူသက်သာပြီး အခမဲ့ပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ လမ်းသစ်မှာ အလုပ်ရှာကြမယ်။
သင်ဟာ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှာနေပါသလား။ ဒါဆိုရင် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ လမ်းသစ် ကိုသွင်းထားလိုက်ပါ။ လမ်းသစ်မှာ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲက အလုပ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။ သင့်မှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကို လမ်းသစ်က ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုခေါ်လိုတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အချက်အလက် ဖော်ပြမှုတွေဟာ သင်အလုပ်လျှောက်ရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုပဲ လမ်းသစ် ဖောက်ကြပါစို့။
Easy, Convenient, Safe and Free!
Are youayouth findingajob? Then you can install Lanthit in your mobile. One click register and you can find your dream job! We will show you which work is best suited with your skill sets. The full information of offered job will come to you by free and you can connect with your potential business owner in no time. Let's ride with "Lanthit"!
lanthit ကိုက်ညီတဲ ကိုသွင်းထားလိုက်ပါ စိတ်ချရတဲ ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ပမယ့် လမ်းသစ် လမ်းသစ်က လမ်းသစ်မှာ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ လွယ်ကူသက်သာပြီး သင့်ကိုခေါ်လိုတဲ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းထဲ သင့်မှာရှိတဲ သင်ဟာ သင်အလုပ်လျှောက်ရာမှာ အရည်အသွေးတွေနဲ အလုပ်ရှာကြမယ် အလုပ်တွေကို အလွန်အသုံးဝင်မှာဖြစ် အိပ်မက်ထဲက ဖောက်ကြပါစို ဖော်ပြမှုတွေဟာ ပြည့်စုံတဲ
good link log need update yacl yhank ပေးပါ ပြော ရှာ
good link update yacl yhank လိုချင် ပေးပါ ဖွေ ပြော ရှာ
log need ငျမရပါ တင်ထားတဲ့အလုပ်မှန်သမ တစ်ခုမှလှမ်းခေါ်တယ်လိ မရဘူးပြန်ပြန်ထွက်သွာ လက်တွေ သုံးလို့အဆငျမပွဘေူး သုံးလို အလကားပါပဲ
Android Support library Firebase Android Architecture Components Google Cloud Messaging (GCM) Google gson Google Analytics Google Maps SDK Okio Picasso Crashlytics BoltsFramework fabric Google ZXing Retrofit ReactiveX NineOldAndroids greenrobot EventBus OrmLite